Caqabadaha ku hor gudban shirka Teendhada | KEYDMEDIA ONLINE
Caqabadaha ku hor gudban shirka Teendhada
Shirka galay maalintiisii 2-aad ee udhaxeeya RW Rooble, madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Benaadir ayaa la tilmaamayaa in uu wajahayo laba qodob oo aad u culus!
MUQDISHO, Somalia - Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ayaa maalintii labaad galay, iyadoo shirku yahay mid albaabada u xiran yihiin oo aan loo ogoleyn warbaahinta. Shirka ayaa si niyadsami ah ku billowday, waxaana la filayaa in madaxda ay guda galaan qodobada qaar ee horay tabashada uga jiray ee la xiriiray hannaanka doorashooyinka.
Arrinta Somaliland ayaa ah qodobka ugu adag ee dooddiisa ay hareyn doonto shirka, maadaama mid ka mid ah labada dhinac ee isku haya arrinta Somaliland uusan weli ku qanacsaneyn qodobkii is fahamkii shirkii 16 -kii Febaraayo ee Baydhabo lagu qabtay.
Madaxweynayaasha DG Jubbaland iyo Puntland Madoobe iyo Deni ayaa kulan la yeeshay xubnaha matala Somaliland oo uu hoggaaminayay Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka xukuumadda Mahdi Guuleed, iyadoo garabka kale ee uu hoggaamiyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Senator Cabdi Xaasshi ay iyaguna dood qabaan.
Waxaa soo baxaya dhaliil xubnaha uu hoggaamiyo Guddoomiye Cabdi Xaashi u jeedinayaan Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor oo ah inuu la safan yahay Mahdi Guuleed, isla markaana uu qabo fikirkii Madaxweyne Farmaajo ee ahaa in Mahdi Guuleed go’aan ka soo gaaro arrinta Gobolada waqooyi.
Rajada shirka laga qabo oo ah mid wanaagsan ayaa sidoo kale noqon karta mid ay wax iska baddalaan, waxaana la tilmaamayaa in labada qodob ee ugu adag ay kala yihiin arrinta gobollada waqooyi ee Somaliland iyo tan Gobolka Gedo, iyadoo sidoo kale ay xusid mudantahay in Guudlaawe uu u olileenayo in wax laga baddalo heshiiskii 17-kii September.